Iska ilaali barnaamijka Kaamiradda Muuqaalka Habeenkii! | Androidsis
Kaliya dhowr saacadood kahor ayaan kugu wargaliyay jiritaanka sida ku cad Kaspersky de Trojan cusub oo adeegsan lahayd shabakadda TOR inay sameeyaan tooda iyaga oo aan isticmaaleyaashu xitaa ogaanin iyo wixii ka sareeya iyadoo aan laga tagin wax raad ah oo xumaantooda ah.
Hada munaasabadan cusub iyo sidoo kale asxaabteena iyo asxaabteena ayaa cadeeyay de Androforall, Chema Alonso, oo caan ah oo caan ah Hacker ayaa ku ogaan lahaa koodh xaasidnimo ah arjiga Kaamirada Aragga Habeenkii taas oo ilaa maanta laga heli karo gudaha Dukaanka ciyaarta soo degsashada iyo rakibida isticmaale kasta oo Android ah.
Hackers-ka aan kor kusoo sheegnay oo caan ku ah Chema Alonso wuxuu si fiican u baari lahaa apk-ga arjiga wuxuuna u soo bandhigi lahaa qof walba barteeda qaybaha koodhka ee loo maleeyo inay xaasidnimo yihiin iyo inay siin doonaan barnaamijka ogolaansho hel oo dir SMS sidoo kale ka dhexgal iyaga si uusan isticmaalehu u dareemin inuu ka mid yahay adeegyadan loogu yeero ee SMS caymis ah Waxay kugu soo dallacayaan lacag aad u tiro badan rasiid kasta oo ah farriin cusub oo la soo gaarsiiyey.
Sidee ku arki kartaa shaashadda shaashadda ee daqiiqado yar ka hor aan ku sameeyay kumbuyuutarkayga shaqsiga ah, barnaamijka wali wuu diyaar yahay dukaanka rasmiga ah ee barnaamijka Android. Rajo taas saacadaha soo socda Google waxay talaabo ka qaadeysaa codsigan la sheegay inuu yahay mid xaasidnimo ahWaxaan kaa codsaneynaa inaadan kala soo dagin oo qofkasta oo rakibay, orod si aad u tirtirto oo aad fiiriso biilka taleefankaaga gacanta si aadan ugula kulmin wax lala yaabo bisha dhammaadkeeda.
Macluumaad dheeraad ah - Feejignaanta Android!: TOR Trojan oo loogu talagalay Android ayaa la ogaaday
Xigasho - Androforall
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Digniinta Android!: Ka taxaddar barnaamijka Kaamiradda Muuqaalka Habeenkii
202Dayaanna 202 dijo
Sideed ku ogtahay inaysan ahayn olole xayaysiis xun oo ka dhan ah arjiga ama shirkadda soo saartay?
Sida iska cad, qalab siinta awoodahaas macquul ma ahan. Sida iska cad waa codsi kaliya midabeeya muraayadaha kaamerada, laakiin halkaa si kadis ah kubbada ay kujirto koodhka xun ayaa la waraabiyaa, maxaa yeelay waa, marka ugu yar la yiraahdo, waa yaab.
Intaas waxaa sii dheer, keydka Google kuma ahan kuwo gaabis ah si aysan u falanqeyn codsiyada ku kaydiya dukaankooda. Kheyraad iyo shaqaale ku filan oo ay u hayaan.
Aynu rajeyneyno ku dhawaaqidda Google ee arrintan la xiriirta in warbaahintu ay ku filan tahay sidoo kale inay gaarto adeegsadayaasheeda.
Jawaab @ 202A (@ 202A)
Si aad u ogaato sababta aadan u rakibin oo aad noogu sheegtid saaxiib, wali waxaa laga heli karaa Play Store si loo soo dejiyo.
Maxaa jawaab ah Francisco ...
Jawaab Juan García
Dhamaantood waa qaniis: v Ggggg
Jawaab Elvis Tek